Kitra – «Caf awards 2018»: voasongon’i Maoritania ny Barea de Madagascar | NewsMada
Kitra – «Caf awards 2018»: voasongon’i Maoritania ny Barea de Madagascar
Niala maina, i Madagasikara teo amin’ny «Caf awards 2018», taranja baolina kitra. Fifaninanana izay ho mendrika, ho an’ny kaontinanta afrikanina. Lanonana, natao tao Dakar, renivohitr’i Senegal, ny talata lasa teo. Anisan’ny nandrandraina fatratra ny Barea de Madagascar, niady ny ho ekipa mendrika. Nosongonan’i Maoritania, nandrombaka ny amboara, ny Barea de Madagascar, tamin’ity.
Rehefa nojerena ny fanadihadiana, ambony eo amin’ny filaharana amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), ny Maoritanianina, eo amin’ny faha-101 raha faha-106 no misy ny Barea de Madagascar. Na izany aza, tsara toerana kokoa ny Malagasy, mihoatra amin’ny zava-bitan’i Maoritania, raha ny dingana sy ny vokatra azo no lazaina.
Ilay faharesena, nanoloana an’i Sodan, teo amin’ny fihaonana miverina no lesoka goavana ary nahavoa ny Barea de Madagascar, ka nandinganan’ny Maoritanianina, azy. Kitoatoa, izay nanimba ny sary tsara efa nipetraka teo amin’ny baolina kitra malagasy.
Tsy nisy inoninona azon’ny Malagasy izany, tamin’ity “Caf awards 2018”, ity. Raha tsiahivina, tsy lany tao anatin’ny fifantenana farany, i Faneva Ima, kapitenin’ny Barea, niady ny ho mpilalao mendrika sy i Nicolas Dupuis, nifaninana teo amin’ny mpanazatra. Tafita tamin’ny famaranana kosa ny Barea, saingy tsy lany teo amin’ny safidy farany.
Raha tsiahivina, mbola lasan’ilay Egyptianina, Mohamed Salah, ny mpilalao mendrika raha i Hervé Renard, ny mpanazatra. Izy izay nitondra an’i Maraoka, tamin’ny “Mondial 2018”.